Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ngaba izicwangciso zeRyanair zeBullish zasehlotyeni ezingama-2022 ziya kuhlawula iZahlulo?
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba eziQhelekileyo zaseIreland • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Inqwelomoya enkulu yexabiso eliphantsi eYurophu ibona ihlobo lowama-2022 njengexesha layo lokuqaqamba, kwaye amalungiselelo ayaqhubeka.
I-Ryanair ibeke ukubheja kwayo ekubuyiseni imfuno ngokuqala ukuqhubela phambili ukuqesha abaqhubi beenqwelo moya abangama-2,000 XNUMX kule minyaka mithathu izayo.
I-Ryanair iya kuthatha ukuhanjiswa kwama-50 eenqwelo-moya zayo ezingama-200 + ngehlobo le-2022.
Ngokufunwa kweentente zokunyuka kokuhamba, iRyanair ingaba enye yeenqwelo zeenqwelo-moya ezifanelekileyo ukufumana imfuno.
I-Ryanair ibeke amehlo ayo kwihlobo elomeleleyo lowama-2022. Ngokuhanjiswa kweenqwelo-moya ezintsha kunye nokuqhutywa kwabantu abaninzi, kunyaka ozayo kujongeka ngathi kuza kuhlawula izabelo kwinqwelomoya, nangona abanye abahambi behlangabezana nohlahlo-lwabiwo mali lokuhamba.
Inqwelomoya enkulu yexabiso eliphantsi eYurophu ibona ihlobo lowama-2022 njengexesha layo lokuqaqamba, kwaye amalungiselelo ayaqhubeka. Ryanair ibeke ukubheja kwayo kwimfuno ebuyayo ngokuqalisa iphulo lokugaywa kwamakhulu amakhulu kubaqhubi beenqwelo moya abangamawaka amabini kule minyaka mithathu izayo. Ngaphaya koko, iRyanair izakuthatha ukuhanjiswa kwe-2,000 yayo entsha ye-50 + yenqwelomoya ngehlobo lowe-200, njengoko ilungiselela elona xesha lixakekileyo emva kwexesha le-COVID ukuza kuthi ga ngoku. Ngenxa yokufuna ukunyuka kohambo njengoko izithintelo ziqala ukuthoba iYurophu iphela, iRyanair inokuba yenye yeenqwelomoya ezime kakuhle ukufumana imfuno, kwaye oku kungathwala iziqhamo kumphathi, ngakumbi ngenqwelomoya entsha.
entsha iBoeing Iinqwelomoya ezingama-737-8200 ziya kubonelela ngezihlalo ezisibhozo xa kuthelekiswa neenqwelo moya zayo zangoku ezili-189, ngelixa kuncitshiswa ukutshiswa kwepetroli nge-16% kwisihlalo ngasinye kunye nokunciphisa ingxolo / ukukhutshwa kwe-CO2, ekufuneka inciphise iindleko ezisezantsi.
Inqwelomoya entsha etshintsha umdlalo wenqwelomoya iRyanair ijonge ukuqhuba isiseko sendleko esezantsi nangaphantsi. Ukuncitshiswa kwamafutha kwisitulo ngasinye kuya kunciphisa inkcitho oyibambayo, oko ke kunika inqwelo moya ukuba yonge iindleko. Ukuba idluliselwe kubagibeli, iRyanair iya kuba sesikhundleni esomeleleyo sokunciphisa amaxabiso etikiti, ikhuphisane ngakumbi, kwaye inyathele iinzwane zabanye abadlali. Inqwelomoya entsha yeRyanair, idibene namanqanaba aphezulu okulindelwa kwepent-up, iya kuthi ibone umntu ophetheyo ehamba phambili kwimeko ye-COVID, etsala abahambi abaninzi abaziyo uhlahlo-lwabiwo mali abanokuthi bathethe ukuthembeka kwabo kwenye indawo ngaphambi kobhubhane.
Uphando lwakutsha nje lubonakalise ifuthe ubhubhane ebenalo kuhlahlo-lwabiwo mali lwabahambi nge-11% yabaphenduli echaza ukuncitshiswa kohlahlo-lwabiwo mali lokuhamba emva kwe-COVID.
Ngemali encitshisiweyo, abahambi ababekade bekhetha abathwali beenkonzo ezizeleyo banokutshintsha baye kubathwali bexabiso eliphantsi okwethutyana. I-Ryanair iya kubekwa kakuhle xa ithelekiswa nezinye, ngakumbi xa inikezelwa ngenqwelomoya entsha kunye neendleko zokonga ezinokudlulisa ukukhuthaza ibango.
Ngapha koko, olunye uvoto lutyhile ixabiso njengeyona nto ibalulekileyo xa ukhetha uphawu lwenqwelomoya. Ngaphezulu kwesiqingatha (iipesenti ezingama-52) zabaphenduli abakhethiweyo amaxabiso / ixabiso njengeyona nto inkulu- ebeka kakuhle kwiRyanair.
Ukuma kukhuphiswano lwenqwelomoya, ixabiso eliphantsi, kunye nenethiwekhi eyandayo yaseYurophu iya kuhlawula izabelo kwaye ibone inqwelo moya njengenyathelo lokukhetha emva kohambo lwe-COVID. Ngomvuzo wento oyifunayo imodeli, iRyanair iya kuba nomtsalane kwabo bafuna eyona nkonzo isisiseko. Ingangcangcazelisa kakhulu abadlali, kwaye indlela yayo yokuqhubela phambili iya kuyibona iphumelela abahambi ukuyinceda ukuba ivele ngamandla kubhubhane.